Turbinin'ny rivotra: inona izany, toetra sy fomba fiasa | Green Renewable
Portillo Alemanina | 01/09/2021 13:54 | Herin'ny rivotra
Ny angovo avy amin'ny rivotra dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny tontolon'ny angovo azo havaozina. Noho izany, tsy maintsy fantarintsika tsara ny fiasan'izy io. ny turbine rivotra Izy io dia iray amin'ireo singa fototra amin'ity karazana angovo ity. Manana fiasa somary feno izy io ary misy karazana turbine isan-karazany arakaraka ny fiompiana rivotra izay misy antsika.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny turbine rivotra, ny toetrany ary ny fomba fiasan'izy io.
1 Inona no atao hoe turbinina rivotra
2 Atin'ny mpamokatra rivotra
3 Singa amin'ny turbine rivotra
Inona no atao hoe turbinina rivotra
Ny turbinin'ny rivotra dia fitaovana mekanika izay manova ny angovo rivotra ho angovo elektrika. Ny turbine rivotra dia natao manova ny angovo kinetika ny rivotra ho angovo mekanika, izay ny fihetsiky ny mpiray. Avy eo, ao amin'ny mpamokatra turbine, ity angovo mekanika ity dia navadika ho angovo elektrika. Ny herinaratra vokarina dia azo tehirizina anaty bateria na ampiasaina mivantana.
Misy lalàna telo momba ny fizika mifehy ny angovo azo avy amin'ny rivotra. Ny lalàna voalohany dia milaza fa ny angovo vokarin'ny turbine dia mitovy amin'ny toradroa amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra. Ny lalàna faharoa dia milaza fa ny angovo misy dia mifanaraka amin'ny faritry ny silany. Miorina amin'ny toradroa amin'ny halavan'ny lelany ny angovo. Ny lalàna fahatelo dia mametraka fa ny fahombiazan'ny teorika turbine dia 59%.
Tsy toy ny fitambolan'ny rivotra taloha an'ny Castilla La Mancha na Netherlands, ao amin'ireo fitoeran-drivotra ireo dia manosika ny lelany hihodina ny rivotra, ary ny turbinina maoderina dia mampiasa fitsipiky ny aerodynamika sarotra kokoa hisamborana ny angovo rivotra amin'ny fomba mahomby kokoa. Raha ny marina, ny antony mahatonga ny turbin-drivotra mifindra ny lelany dia mitovy amin'ny antony mijanonan'ny fiaramanidina eny amin'ny rivotra, ary noho ny fisehoan-javatra ara-batana no nahatonga izany.
Ao amin'ny turbine rivotra, karazana hery aerodynamika roa no vokarin'ny lelan'ny rotor: ny iray antsoina hoe thrust, izay mifanitsy amin'ny làlan'ny fivezivezin'ny rivotra, ary ny iray kosa antsoina hoe drag, izay mifanitsy amin'ny làlan'ny fivezivezin'ny rivotra. . rivotra.
Ny famolavolana ny turbine glades dia mitovy amin'ny an'ny elatra fiaramanidina ary mitondra tena toa ity farany amin'ny toetr'andro. Amin'ny elatra fiaramanidina dia boribory be ny velarana iray, fa ny iray kosa somary fisaka ihany. Rehefa mivezivezy amin'ny alàlan'ny lelan'ny fikosoham-bolo io rivotra io dia miadana kokoa noho ny onjampeo mamakivaky ilay faritra boribory ny rivotra. Ity fahasamihafana hafainganam-pandeha ity dia hiteraka fahasamihafana eo amin'ny tsindry, izay tsara kokoa amin'ny faritra malama noho ny amin'ny faritra boribory.
Ny valiny farany dia hery miasa amin'ny faritra malama an'ny elatry ny mpitsongo. Ity tranga ity dia antsoina hoe "effet Venturi", izay ao anatin'ny anton'ny fisehoan-javatra "fisondrotana", izay izy indray no manazava ny antony mijanonan'ny fiaramanidina amin'ny rivotra.
Atin'ny mpamokatra rivotra
Ny lelan'ny turbin-drivotra dia mampiasa ireo mekanisma ireo ihany koa mba hiteraka fihodinana manodidina ny axis. Ny famolavolana fizarana volo dia manamora ny fihodinana amin'ny fomba mahomby indrindra. Ao anatin'ny mpamorona herinaratra, mitranga ny dingan'ny fanovana ny angovo mihodina amin'ny lelany ho angovo elektrika amin'ny lalàn'i Faraday. Tsy maintsy ampidirina ny rotor mihodina eo ambany fitarihan'ny rivotra, ampiarahina amin'ny alternator, ary manova ny angovo mekanika mihodina ho angovo elektrika.
Singa amin'ny turbine rivotra
Ireto ny asan'ny singa tsirairay napetraka:
Fanodina: Manangona angovo avy amin'ny rivotra izy ary mamadika azy ho lasa angovo mekanika mihodina. Na dia amin'ny toetr'andro haingam-pandeha ambany dia ambany aza ny endriny. Hita avy amin'ny teboka teo aloha fa ny volavolan-tsokosoko dia ny lakilen'ny fiantohana ny fihodinan'ny rotor.
Rafitra na rafitra fanohanana turbine: ampifanaraho amin'ny hetsiky ny fihodinan'ny rotor mpamorona ny fifandimbiasan'ny elatra izay ampiarahiny.
Multiplier na boaty boaty: Amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra mahazatra (eo anelanelan'ny 20-100 km / ora), ambany ny hafainganam-pandehan'ny rotor, manodidina ny 10-40 fihodinana isa-minitra (rpm); Mba hamokarana herinaratra, ny rotor an'ny mpanamboatra dia tsy maintsy miasa amin'ny 1.500 rpm, noho izany ny nacelle dia tsy maintsy misy rafitra manova ny hafainganam-pandeha avy amin'ny sanda voalohany ka hatramin'ny sanda farany. Izy io dia tanterahina amin'ny alàlan'ny mekanika mitovy amin'ny boaty eo amin'ny motera fiara, izay mampiasa andian-tsarimihetsika marobe hanodinana ny ampahany mihetsika amin'ny mpamokatra amin'ny hafainganam-pandeha mety hamokatra herinaratra. Izy io koa dia misy frein hanakanana ny fihodinan'ny rotor rehefa mahery be ny rivotra (mihoatra ny 80-90 km / ora), izay mety hanimba ny singa rehetra ao amin'ilay generator.
Generator: Izy io dia fivorian'ny rotor-stator izay mamokatra angovo herinaratra, izay ampitaina amin'ny tariby napetraka ao amin'ny tilikambo izay manohana ny nacelle, ary avy eo dia ampidirina ao anaty takelaka. Ny herin'ny generator dia miova eo anelanelan'ny 5 kW ho an'ny turbine medium sy 5 MW ho an'ny turbine lehibe indrindra, na dia misy turbine 10 MW aza.
Môtô orientation: Ahafahanao mihodina ireo singa hametraka ny nacelle amin'ny làlan'ny rivotra mandalo.
Andry manohana: Izy io dia ny fanohanana ara-drafitra an'ny mpamorona. Ny haben'ny herinaratra turbine dia ny halavan'ny lelany ary noho izany dia mihabe ny haavon'ny toerana tokony hisy ny nacelle. Manampy fahasarotana fanampiny amin'ny famolavolana tilikambo izy io, izay tsy maintsy manohana ny lanjan'ny andiana mpamorona. Ny lelan-tsabatra koa dia tsy maintsy manana hamafin'ny firindrana avo mba hahatohitra ny rivotra mahery nefa tsy tapaka.
Paddles sy anemometers: fitaovana hita ao aorinan'ny gondola izay misy milina mpamokatra herinaratra; izy ireo no mamaritra ny lalana sy ny refesina ny hafainganam-pandehan'ny rivotra, ary mihetsika amin'ny lelany mba hanapahana azy ireo rehefa mihoatra ny tokonam-baravarana ny hafainganam-pandehan'ny rivotra. Ambonin'ity tokonam-baravarana ity dia misy atahorana ho turbine amin'ny firafitra. Ity dia mazàna famolavolana karazana turbine Savonious.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny turbine rivotra sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Herin'ny rivotra » Turbine rivotra